Ukudunwa Kokuhlu Kwama-Amazon | Izindlela ezi-3 eziphezulu zokukhipha abaduni ohlwini
Susa abaduni kuhlu lwakho lwe-Amazon
Ukudunwa Kokufakwa ohlwini kwama-Amazon: Ukuqhuba ibhizinisi le-Amazon eliphumelelayo kuyindlela enzima yokulwa nokuncintisana nokugcina isevisi enhle yamakhasimende. Kunezinselelo eziningi ezisendleleni kanti kusenabathengisi abaningi abasebenza kanzima ukuhlinzeka okuhle kakhulu. Nokho! Kukhona abanye abamane bathande ukuthatha izindlela ezinqamulelayo. Yebo, le nkatho empeleni yaziwa njengabaduni be-Amazon. Benza indawo yabo emakhasini emikhiqizo athengisa kakhulu futhi bathathe ibhizinisi lomthengisi othembekile elizoba khona. Uma ngabe wake wahlupheka noma uhlushwa i-Amazon Hijacked Listing ke i-athikili yethu izokusiza ukuthi ususe isigelekeqe kuyo.
Kepha ngaphambi kokuthatha noma yisiphi isenzo, kubalulekile ukuthi ube nokuqonda okuyisisekelo. Kungani? Ngoba lezi zinkinga ziphindaphindeka futhi zingakuhlupha njalo. Futhi, Kungumcabango okholwayo ukuthi akukho ukulungiselela okungcono kunolwazi.
Bangobani abaduni be-Amazon?
Igama elithi "isigelekeqe" kungenzeka lisetshenziselwe ukusebenza. Kepha, konke abaku… bangabathengisi noma abasabalalisi abavela eceleni abazoduna uhlu lwakho lomkhiqizo bese banikela ngomkhiqizo ofanayo kumkhiqizo onesaphulelo. Kuba kubi kakhulu lapho behlinzeka ngomkhiqizo njengawe empeleni okulingisa okungabizi kakhulu kwalokho okunikezayo. Bese kuba khona ezinye izikhathi lapho njengabathengisi nihlinzeka ngemikhiqizo ngentengo enesephulelo yokuphromotha. Kepha, laba baduni bohlu lwama-Amazon bazothenga uhlu lwakho ngaleso sikhathi futhi bazothumela lowo mkhiqizo ngezikhathi ezijwayelekile ngezinga elehlisiwe.
Lokhu kubuhlungu ngempela ngoba ibhokisi lakho elithi “Thenga Ibhokisi” okusho ukuthi ibhokisi lokhiye lenqola loniwa. Esikhundleni sokukuxhasa, kusetshenziswa isigelekeqe njengoba umnikelo waso oshibhile ubukeka njengesiphakamiso esingcono kumakhasimende ajwayelekile.
Izinhlobo zabaduni be-Amazon nokuthi baluduna kanjani uhlu lwakho lomkhiqizo we-Amazon
Ngezansi sishilo ngezinhlobo zabaduni kanye nendlela abaduna ngayo uhlu lwakho lomkhiqizo:
Abenzi bomgunyathi: Laba ikakhulukazi ngabakhiqizi nabasabalalisi abanomkhiqizo ofanayo kodwa onekhwalithi engeyinhle. Bazokopisha incazelo yomkhiqizo wakho kusuka ezithombeni kuya embhalweni futhi bazoklelisa umkhiqizo wabo. Lokhu kufakwa kuhlu kwehlukile kokwakho kepha kungaphazamisa isithombe esiphelele somkhiqizo. Kubalulekile ukuthi ususe laba baduni ngesikhathi
Umqambimanga: Lezi zimane zikopishe yonke idatha yakho bese zibhala uhlu lomkhiqizo wazo. Ukuphela kwento ezohluka igama lomthengisi. Ngale ndlela basebenzisa wonke amaphromoshini nokusebenza kanzima okwenzayo ngaphandle kokuchitha ngisho isenti elilodwa.
Ama-Sabotagers: Lokhu mhlawumbe kubi kakhulu kunakho konke ngoba akugcini ngokuduna ibhokisi lakho lokuthenga, kepha futhi bacekela phansi uhlu lwakho lomkhiqizo. Lowo owenza ukuthengisa okuningi ungumnikazi womkhiqizo okusho ukuthi bangashintsha izithombe, incazelo, nokuthi yini. Eqinisweni, kube nezikhathi lapho ngisho nokubuyekezwa kukhishwa ngokusebenzisa ama-bots ngokubeka izibuyekezo ezimbi. Kubalulekile ukuthatha isinyathelo mayelana nokususwa kwesigelekeqe kuleli cala.
Ukudunwa kanjani kungaba yingozi ku-Amazon Business yakho?
Yonke into entshontsha ibhizinisi kuwe inobungozi ebhizinisini lakho. Kepha-ke kukhona ezinye ezingakuthinta ngezindlela ezingaphezu kweyodwa. Futhi, akukaze kube kuhle ukubanjwa endaweni lapho omunye umuntu akwenzayo kuthinta ukusebenza kwakho kanzima. Kuyibhizinisi elinzima futhi ukulahlekelwa yinoma yini ngenxa yanoma yisiphi isizathu esibizwa ngokuthile kunganciphisa amandla.
Kepha ukushiya eceleni, kunezindlela ezimbalwa ukufakwa kuhlu okuduniwe kwe-Amazon okungathinta ibhizinisi lakho:
Ukulahleka Kwebhizinisi: Leli yiphuzu elisobala kakhulu. Lapho umthengi eza ekhasini lakho lokho kusho ukuthi ukukhushulwa kwakho, izinga lakho, nekhwalithi yomkhiqizo sekuqalile ukusebenza. Nokho! Esikhundleni sokuthi wenze ukuthengisa lapho omunye umuntu esizakala ngosizo lwakho lokho kuholela ekulahlekelweni kwebhizinisi. Abathengi bazovakashela ikhasi lakho kodwa bathenge kumduni okusho ukuthi wenza ukuthengisa okuncane nenzuzo encane.
Isilinganiso esibi: Ukulahlekelwa yimali kungenye into kodwa ukulahlekelwa ukwethembeka kungenye into. Ku-Amazon, isilinganiso kumkhiqizo wakho siyinkomba eyinhloko yekhwalithi oyinikezayo. Lapho isigelekeqe sinikela ngokungqongqoza okushibhile sisebenzisa ukufakwa kuhlu kwakho, kungagcina kuthinte isilinganiso sakho. Amakhasimende angenelisekile azoza ekhasini lakho lomkhiqizo futhi azonikeza izibuyekezo ezimbi nezilinganiso. Uma kungahloliwanga ngesikhathi lokho kungaholela nasekumisweni komthengisi, futhi ungithembe kuyinto ongayifuni nhlobo.
Izinga elibi: Kumiphumela yosesho, umkhiqizo wakho uphezulu. Lokhu kusho ukuthi amathuba okwenza ukuthengisa aphezulu. Yize, lapho ukufakwa kuhlu kwakho kufakwa engozini yi-Amazon Hijacker bese ethatha inzuzo yakho. Lokhu kusho ukuthi wenza ukuthengisa okuncane. Futhi ngokusobala, ukufakwa ohlwini okwenza ukuthengisa okuncane kuvame ukuhudulelwa ezansi. Kubuhlungu ngokuphelele ngoba ukugcina izinga elihle kuthatha umsebenzi omningi, umkhiqizo omuhle, insizakalo yamakhasimende ehlukile, futhi kuvame imali ekukhushulweni. Futhi kuhlale kulula ukulahlekelwa isikhundla bese usithola ikakhulukazi uma usemakethe yokuncintisana.
Ungawuthumba kanjani uMduni njengohlu lwakho lomkhiqizo?
Lokhu kwenzelwa izinjongo zemfundo kuphela futhi asikhuthazi neze indlela enjalo yokuziphatha. Futhi, uma ufisa ukuchitha ubuchopho bakho kokuthize, akukho okungcono kunokufakwa kuhlu kwakho. Noma kunjalo, ukufunda ukoniwa njalo kuyindlela engcono kakhulu yokuzivikela. Futhi, uma ungazi ukuthi uhlu lwakho lomkhiqizo lungasatshalaliswa kanjani, awukwazi ukwakha udonga nxazonke ukugwema into efana nale ngokuzayo.
Izinto Okufanele Uzikhumbule ngaphambi kokudunwa kohlu lwama-Amazon
Ama-hijacks brand angaziwa.
Uma ufisa ukuntshontsha umkhiqizo owaziwayo bese udinga ukugunyazwa lokho kusuka kulo mkhiqizo uqobo (kodwa ukugunyazwa kokuthengisa hhayi ukuduna).
Ingabe umkhiqizo owuthumbayo utholakala kuwebhusayithi yophawu lomkhiqizo njengomkhiqizo onelungelo lobunikazi noma obhalisiwe.
Udinga ukuba ne-akhawunti yomthengisi engaphezu kweyodwa ukuze udune.
Uma uthengisa ukulingisa ngakho-ke kuyalulekwa ukuthi ubheke umehluko phakathi kwencazelo yomkhiqizo nokunikezwa kwakho komkhiqizo.
Ukufakwa kuhlu okuduniwe okuthengwa kakhulu.
Gwema ukuduna noma yikuphi ukufakwa ohlwini okuvele kungadunwa ngomunye umuntu.
Lapho uthola incwadi yokugunyazwa esikhundleni sokujabulisa noma ubani, vele ume uhlu lwakho.
Qaphela: Kungakuhle ukuthi unake incazelo yomkhiqizo yohlu oluduniwe lwe-Amazon nganoma yiziphi izinguquko. Ukwehluleka ukwenza lokho kungaholela ekuthunyelweni okungalungile.
Izinyathelo zokuduna Uhlu lomkhiqizo we-Amazon
Vula ikhasi lomkhiqizo ofisa ukuliduna.
Manje iya ebhokisini elithi "Thenga Ibhokisi" bese uqhafaza inkinobho ethi "Thengisa ku-Amazon" etholakala ezansi kweThenga Ibhokisi.
Uzoqondiswa kabusha ku-Amazon Seller Central, lapho chofoza kuthebhu "yokusungula" bese ukhetha "Engeza umkhiqizo".
Manje faka imininingwane efana ne-UPC, ASIN, noma isihloko esisetshenziselwa umkhiqizo.
Ekugcineni! Chofoza inkinobho ethi "Thengisa Okwakho" bese ukuthengisa kwakho kuzoqala.
Manje njengoba ekugcineni usufundile ukudunwa kohlu lwama-Amazon gwema ukukwenza ngezindleko. Kungumsebenzi wesikhashana futhi uyeka ukukhiqiza inani uma umthengisi uqobo elibambile. Ngaphezulu kwalokho, kungaphela nokuyekethisa i-akhawunti yakho yomthengisi. Futhi, kukodwa kungumdlalo webhola ohluke ngokuphelele ukuba nama-akhawunti amaningi wabathengisi ngoba uhlelo lwe-Amazon AI luhlola konke. Futhi, uma amasistimu ethola ukuthi usebenzisa i-akhawunti engaphezu kweyodwa amathuba okuthi ukumiswa kwawo aphezulu kakhulu. Ngenkathi ukumiswa kungabonakala kungeyona into enkulu ngoba ukuziduna ngokwakho akulungile ngokokuziphatha. Nokho! Lokhu kungakususa onke amathuba akho okudala i-akhawunti yomthengisi ngokuzayo futhi uma ucabanga ngokufaka kabusha ungithembe, siyinsizakalo futhi siyazi ukuthi ubunzima bonke lobu bungaba nzima kangakanani.
Ungabathola kanjani abaduni beAmazon ohlwini lwakho?
Manje, njengoba unemfundo eyanele mayelana nokudunwa, sekuyisikhathi sokwazi ukuthi ungabona kanjani ukuthi uhlu lwakho lomkhiqizo luduniwe yini. Yebo, kunezindlela ezimbalwa zecala elilodwa elenza kanjalo. Futhi, sishilo lezo ezingezansi:
Uma othile ebekade esebenzisa ukufakwa kuhlu kwakho ukuthengisa umkhiqizo wakhe ongeyena. Futhi, lowo owenza lokho akanayo ilayisense yokukwenza.
Uma othile ecele i-Buy Box yakho ukuthi athengise umkhiqizo wakhe.
Ngokungazelelwe, uma uqala ukuthola izibuyekezo ezimbi kusuka kumakhasimende yize unikezela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme.
Ngaphezu kwalokho, uma uvula lelo khasi lohlu nokuthi ubona ini kufana nekhasi lakho lomkhiqizo.
Izindlela ezihamba phambili zokususa abaduni kuhlu lwakho lwe-Amazon oluduniwe
Lapho okuthile kungahambi kahle, kubalulekile ukuthi uthathe izinyathelo ezidingekayo. Lokhu kunjalo nge-Amazon Hijacked Listing. Uma kukhona okungahambi kahle ngakho-ke kungumsebenzi wakho ukuba ngumnikazi oziqhenyayo walolo hlu lomkhiqizo ukuthi uthathe izinyathelo ezidingekayo. Lolu hlobo lokuziphatha kwanoma ngubani alubekezeleleki futhi ukususwa kwesigelekeqe kufanele kube yinjongo yakho yesibambiso. Ngakho-ke ngezansi ezinye zezindlela ezizosebenza ngempumelelo ekususeni abaduni:
Thumela i-Amazon Cease and Desist Letter
Ukubhekana ngqo nabaduni kwenza ingxenye yesikhathi yokukhohlisa. Iningi labaduni liyaqhubeka nokusebenza ngoba linomuzwa wokuthi alikatholakali. Futhi, into yokuqala abayenzayo lapho bethola ukungabhalisi uhlu lwabo. Yize ukuthumela incwadi ejwayelekile kungeke kukusize kakhulu, udinga ukuthumela i- Incwadi ye-Amazon Cease and Desist. Ifomethi yalokho ihlinzekwa yi-Amazon uqobo. Ungabheka ifomethi engezansi kwayo uqobo:
Qiniseka ukuthi ushintsha ifomethi ngokuya ngezidingo zakho. Ifomethi engenhla inikezwa ngokusemthethweni yi-Amazon ukusiza ukulwa nesimo esinjalo.
Xhumana ne-Amazon bese ubika ukwephulwa komthetho
Ukuyeka nokuyeka izincwadi kuvame ukusebenza kahle kakhulu. Kepha, uma lokho kungasebenzi ukuxhumana no-Amazon nokufaka isikhalazo kuzokwenza iqhinga lokususa isigebengu. I-Amazon inzima kakhulu emisebenzini emibi futhi imvamisa isiza abathengisi ukulwa nayo.
Manje, isikhathi esithathiwe kanye nekhambi kuzoncika ekutheni umkhiqizo wakho ubhaliselwe uphawu lwentengiso noma cha. Uma umkhiqizo wakho ubhaliselwe uphawu lokuhweba ngakho-ke konke okumele ukwenze ukubhala incwadi emfushane equkethe imigqa embalwa esho inkinga yakho. Ukuze uthole usizo olusebenzayo, kuhle ukuthi wabelane ngesithombe-skrini somkhiqizo njengobufakazi bese wabelana nangesixhumanisi sohlu lomduni. Konke lokhu kuzokwenza ubuqili kanti isigelekeqe sizokwehliswa ngokushesha.
Kodwa ngakolunye uhlangothi, uma umkhiqizo wakho ungabhalisiwe kungathatha isikhashana njengoba kushiwo ngaphambili. Udinga ukuba nemininingwane eminingi ngangokunokwenzeka kepha ngendlela emfushane. Okuqukethwe yincwadi yakho kufanele kutshele ngesimo sakho hhayi okunye. Kufanele futhi uthumele ubufakazi bokuthi uhlanganiswe nezithombe, izithombe-skrini, izixhumanisi… noma yini onayo. Incwadi izothunyelwa ku-Seller Performance ku-imeyili yabo ie ie seller-performance@amazon.com.
Manje lokhu kubonakala kungavumelani ncamashi. Kwenye indawo sizama ukukusindisa kulokhu nakwezinye sikhuluma ngokunikeza abaduni imoto ibhizinisi. Akunjalo. Empeleni ukuthenga kumduni kuzokutholela ubufakazi obukhulu. Akukho okungaba ubufakazi obungcono kunomkhiqizo uqobo. Abantu abathenga izinto kuwe ngentengo ephansi bese bezithengisa ngokuhamba kwesikhathi bangosomathuba.
Kepha, uyazi ukuthi kunomkhawulo kukho. Ngakolunye uhlangothi, uma umuntu ethengisa ukulingisa, ikhwalithi yomkhiqizo kungenzeka ihlehlise. Izibuyekezo ezimbi ozobe uzithola zingubufakazi bokugcina balokho. Ungathumela isithombe salowo mkhiqizo bese uchaza ukuthi uhluke kanjani kulokho okunikezayo. Futhi, futhi khuluma ngokuthi ayikuthetheleli kanjani incazelo yomkhiqizo. Lokhu kuzokwenza ukuthi udaba lwakho luqine futhi lube yikhambi kuwe ekugcineni. Le ndlela isebenza kangcono ekususeni isigelekeqe kubathengisi abangenawo umkhiqizo obhalisiwe.
Ungakuvimbela kanjani ukudunwa kohlu lwama-Amazon?
Ukuvimbela kuhlala kungcono kunokwelapha. Futhi nami ngokwami ​​ngiyakukhuthaza lokhu (yize ngivame ukuvilapha) kepha ngomsebenzi lokhu akufanele kube njalo. Futhi ukuba nebhizinisi eligculisayo neliphumelelayo ngaso sonke isikhathi kungcono ukuthi usebenze kancane. Ngakho-ke, ngezansi kunezindlela ongazisebenzisa ukuvimbela ukudunwa kohlu lwama-Amazon:
Kubalulekile ukuphusha uphawu lomkhiqizo ohlwini lwakho. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi umthengi oza ekhasini lakho lomkhiqizo unokuthile okuzohlukanisa. Empeleni, kungaba yindlela enhle kakhulu yokuzivikela kumduni kungaba owokuqala noma wokuduna. Ukuba nelogo eshiwo ngokucacile ezithombeni zakho kuzokwazisa abathengi ukuthi umkhiqizo abawuthengayo uhlukile kulowo odayiswa abaduni. Futhi uma isigelekeqe sikopisha leso sithombe futhi ungavele wenze i-oda noma usebenzise noma yiziphi izibuyekezo ezimbi ezikhuluma ngaso, bese usisebenzisa ukwenza icala eliqinile phambi kwe-Amazon.
Njalo Hlola Ukufakwa kuhlu kwakho
Kubalulekile ukuthi uhlale uhlola izinhlu zakho. Futhi, uma uthola noma yini engathandeki eyenzekayo bese uthatha izinyathelo nge-ASAP. Okungenani ukuthumela incwadi ye-Amazon Cease and Desist ngeke kube nengcindezi nganoma iyiphi indlela.
Ukugoqa njenge-logo kunikeza inzuzo yamasu. Umuntu angakha inqwaba yeminikelo futhi athengise ku-Amazon ngezinto zokuncoma noma izinto ezihlukile kumkhiqizo wakho. Ukuhlwaya zonke izinto ezisenqwabeni kungaba yisidina impela futhi kukuhlukanisa ngokweqile nesigelekeqe uqobo lwaso.
Beka uphawu lokuhweba Imikhiqizo Yakho ye-Amazon
Ukumaketha kuzokunikeza inzuzo eyengeziwe yezomthetho futhi ungabika i-Amazon ngokwephulwa kwe-copyright. Mane nje ubeke uphawu uphawu lwakho lokuthengisa futhi uma omunye umuntu esebenzisa umkhiqizo wakho ngaphandle kokugunyazwa kwakho, unecala elisemthethweni lokumthathela izinyathelo. Futhi ngikhuluma ngezenzo ezibucayi ezingagcini ngokumiswa nje kuphela.
Nikeza Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Imali
Lokhu kungenzeka kungenzeki kuwo wonke umuntu okwamanje uma ungakwazi ukukwenza kungaba umuthi opholisa izinhlungu ohloniphekile. Iningi labaduni njengoba kuxoxiwe ngaphambili banikela ngemikhiqizo engemihle. Lokhu kusho ukuthi ukwethula isiqinisekiso sokubuyiselwa imali uma umkhiqizo ungekho kahle kuzodalela isigebengu isihlobo izinkinga. Kuyinto ebucayi eyodwa ongayenza ukuvikela uhlu lwakho lomkhiqizo.
I-Amazon yibhizinisi lokuncintisana futhi umsebenzi wokususa isigelekeqe kungaba wubuhlungu obuhle. Kepha, kubalulekile ukuthi umuntu akuthathe. Impumelelo iqoqo lezenzo ezahlukahlukene ozithathile ohlangothini oluthile. Futhi kuzoba nabantu abazoza njengezithiyo endleleni yakho. Kubalulekile ukuthi ungalahli ithemba bese ubuyela emuva ngamandla.
Uma ufuna insiza yokumisa umthengisi eyi-Amazon lapho-ke singasiza. Singa I-APlus Global Ecommerce futhi siyiqembu labantu abasebenza ngokungakhathali ukubuyisela ama-akhawunti wethu wabathengi. Uma wena noma abangane bakho nidinga umuntu onjengathi ngomusa bhekani. Ungathola nokubonisana kwamahhala ngokufaka imininingwane yakho ekhasini lethu eliyisiqalo ngokuchofoza lapha. Ngaphandle kwalokho sinikezela nangezinye izinsizakalo ezihlobene ne-Amazon. Siyethemba ukuthi le ndatshana kungenzeka ibe usizo kuwe. Futhi, ngiyabonga ngokuyifunda kuze kube sekupheleni.
Izinsizakalo Ezidumile ezivela kwa-Aplus Global Ecommerce
Incwadi Yesikhalazo ye-Amazon
Uhlelo Lokusebenza Lwe-Amazon
Inqubomgomo Yempahla Yengqondo ye-Amazon ingayilimaza kanjani i-Akhawunti yakho Yomthengisi?